Ushicilelo - Yenza
Imixholo yamaphepha ethu yenziwe ngononophelo olukhulu. Nangona kunjalo, asinakuqinisekisa ngokuchaneka kwemixholo, ukugqibelela okanye umxholo. Ngokwezibonelelo ezisemthethweni, sinoxanduva lokuqulatha umxholo wethu kula maphepha ewebhu. Kule meko, nceda uqaphele ukuba asinyanzelekanga ukuba sibeke esweni ulwazi olugqithisiweyo nolugciniweyo lomntu wesithathu, okanye siphande iimeko ezibonisa ukungabikho mthethweni. Uxanduva lwethu lokususa okanye lokuthintela ukusetyenziswa kolwazi phantsi kwemithetho esebenzayo ngokubanzi kuhlala kungachaphazeleka koku ngokwe-§§ 8 ukuya kwi-10 yoMthetho weTelemedia (TMG).
Amaphepha ethu ewebhu kunye nemixholo yawo aphantsi komthetho welungelo lokushicilela waseJamani. Ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngumthetho (§ 44a et seq. Yomthetho welungelo lokushicilela), zonke iindlela zokusebenzisa, ukuvelisa okanye ukuqhubekeka nemisebenzi ngokuxhomekeke kukhuseleko lwamalungelo obunini kumakhasi ethu ewebhu zifuna imvume yangaphambili yomnini welungelo. Ukuveliswa komntu ngamnye kuvunyelwe kuphela ukuba kusetyenziswe ngasese, ke akufuneki kusebenze ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwimivuzo. Ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kwemisebenzi ene-copyright kuyagwetywa (§ 106 yomthetho welungelo lokushicilela).